Renovables Verdes bu webusaiti nke Actualidad Blog ọkachamara na ume ọhụrụ na gburugburu ebe obibi. Anyị na-emeso ike ọ bụla kachasị nwee mmekọrịta anyị na mbara igwe ma were ha tụnyere ndị nke ụwa. Anyị bụ ọkachamara na-enye nkọwa eziokwu na nke siri ike.
Ndị nchịkọta akụkọ nke Renovables Verdes mejupụtara otu ìgwè nke ndị ọkachamara na ume ọhụrụ, dị ọcha ma na-acha akwụkwọ ndụ, nke otu n'ime ha bụ ndị gụsịrị akwụkwọ na sayensị gburugburu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iso n’otu otu, ị nwere ike zitere anyị fọm a ka ị bụrụ onye ndezi.
Gụsịrị akwụkwọ na sayensị gburugburu ebe obibi na Master na Mmụta gburugburu ebe obibi na Mahadum Malaga. Ofwa nke ume ọhụrụ na-eto eto ma na-abawanye uru na ahịa ike gburugburu ụwa. Agụọla m ọtụtụ narị akwụkwọ akụkọ sayensị banyere ume ọhụrụ na ogo m enwere ọtụtụ isiokwu na ọrụ ha. Na mgbakwunye, a zụrụ m nke ukwuu na imegharị ihe na nsogbu gburugburu, yabụ ebe ị nwere ike ịchọta ozi kachasị mma banyere ya.
Mmasị maka nkà na ụzụ na sayensị mere ka ọdịdị na gburugburu ebe obibi dị. Ọkà na ụzụ na mgbochi ihe ize ndụ ọrụ na ụlọ ọrụ na technician na gburugburu ebe obibi management.
Injinia kọmputa nwere mmasị na akụnụba ụwa, ọkachasị ahịa ahịa na ume ọhụrụ.
Kwenye na gburugburu ebe obibi na otu o si bụrụ ihe dị mkpa iji na-agbaso ihe niile na-eme gburugburu ụwa na ụwa anyị. Na ebumnuche nke inye ntakịrị ihe banyere ihe gbara anyị gburugburu.